ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆိုလာအားသွင်းကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူ၊ လက်ကား ဆိုလာအားသွင်း ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ နေရောင်ခြည်အားသွင်း ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | Welead
controller Build ဟာ Off-grid နေရောင်ခြည်စနစ်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးတာဝန်ခံနဲ့ controller အပေါ်အာရုံစူးစိုက်
Ocean Dream စီးရီး PWM ဆိုလာအားသွင်းကိရိယာ
Ocean Dream Series (OD အတိုအားဖြင့်) သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော PWM နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားချက်မှာ အတွင်းပိုင်း 32 bits CPU တွင်ရှိပြီး controllers များကို ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အတွင်းတွင် 4USB ပေါက်နှင့် ဝက်အူဒရိုက်ကို တည်ဆောက်ထားသည်။ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအနက်ရောင်&အနီရောင် ကြီးမားသော terminals ဒီဇိုင်းသည် သင့်ချိတ်ဆက်မှုကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချနိုင်စေပါသည်။ အဖြူရောင်အေးစက်နေသော ပလပ်စတစ်အခွံသည် သင့်အိမ် သို့မဟုတ် RV တွင် မည်သည့်နေရာတွင်ထားရှိပါစေ အလွန်သဘာဝကျပါသည်။ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ဒေတာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Tracer Dream 100V စီးရီး MPPT ဆိုလာအားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ
Tracer Dream 100V TU Series သည် MPPT နည်းပညာကို လက်ခံသည်။ Max.100V ဆိုလာထည့်သွင်းမှု၊ 12V/24V အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းကို 32 bits CPU ဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့် တည်ငြိမ်မှုနှင့် မြန်နှုန်းကို အာမခံနိုင်ပါသည်။ synchronous rectifier နည်းပညာကို အခြေခံ၍ circuit ၏ လွှဲပြောင်းမှု ထိရောက်မှုကို 98.5% အထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး Pmax ခြေရာခံခြင်း တိကျမှုကို 99. 5% အထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ MPPT သည် နေရောင်ခြည် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော်လည်း အတိုဆုံးအချိန် (10 ~ 20s) အတွင်း တိကျသော Pmax ကို ခြေရာခံနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောရာသီဥတု သို့မဟုတ် အားနည်းသောနေရောင်ခြည်ကို ကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို ဘုံအပျက်သဘောဆောင်သည့်ဒီဇိုင်းဖြင့် လက်ခံထားပြီး ၎င်းကို နေရောင်ခြည်မှစတင်နိုင်သည်၊ RV၊ သင်္ဘောစသည်ဖြင့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ဒေတာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Tracer Dream 75V စီးရီး MPPT ဆိုလာအားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ
Tracer Dream 75V စီးရီးသည် MPPT နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို 32 bits CPU ဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့် တည်ငြိမ်မှုနှင့် မြန်နှုန်းကို အာမခံနိုင်ပါသည်။ synchronous rectifier နည်းပညာကို အခြေခံ၍ circuit ၏ လွှဲပြောင်းမှု ထိရောက်မှုကို 98.5% အထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး Pmax ခြေရာခံခြင်း တိကျမှုကို 99. 5% အထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ MPPT သည် နေရောင်ခြည် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော်လည်း အတိုဆုံးအချိန် (10 ~ 20s) အတွင်း တိကျသော Pmax ကို ခြေရာခံနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောရာသီဥတု သို့မဟုတ် အားနည်းသောနေရောင်ခြည်ကို ကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ဒေတာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
က Sky အိပ်မက်စီးရီး PWM နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Charge Controller ကို ldsolar
က Sky အိပ်မက်စီးရီး (တိုတိုအတွင်း SD က) ကြှနျုပျတို့၏အသစ်ဒီဇိုင်း PWM နေရောင်ခြည်နဲ့ controller ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်း 32-bits ပိုမိုမြန်ဆန်အလုပ်ဖို့နဲ့ controller ဖွထားတဲ့ CPU ကိုနှင့်ထို့ထက် ပို. တည်ငြိမ်၎င်း၏အထူးမုသာစကား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားသောအနက်ရောင်, အပြင်&အနီရောင်ကြီးတွေဆိပ်ကမ်းကိုမှန်ကန်လျှောက်လွှာ၌သင်တို့၏ဆက်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ဒီဇိုင်း။ ဒါဟာပိုမိုမြင့်မားသည့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကျော်စံ။ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါဒေါင်းလုပ်ဒေတာ
OEM နှင့်လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးရရှိနိုင်ဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူတစ်ဦး Win-Win ခွအေနကေိုရှာကြိုးစားကြသည်။
အဆိုပါ R ကိုအပေါ် ld နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအာရုံစူးစိုက်&: D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နေရောင်ခြည်နဲ့ controller ၏ရောင်းအား။ ဒါဟာနက်ရှိုင်းစွာကျော်ကို 10 နှစ်ကြာများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်သာနေရောင်ခြည်နဲ့ controller ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဲ့ controller ကောင်းစွာပြီးပြီမဟုတ်ကြလျှင်, ငါတို့သည်စျေးကွက်အားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြပေသည်။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Charge Controller ကိုထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, Welead ပြည့်စုံ Pre-အရောင်း, Mid-အရောင်းနှင့်အပြီး-ရောင်းအားန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူလက်ကားနေရောင်ခြည် Charge Controller ကိုနေရောင်ခြည် Charge Controller ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းပေးသည်နှင့် OEM / လိမ္မော်ရောင်စိတ်ကြိုက် support ကြိုဆိုသည်။ အရည်အသွေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုထုတ်ကုန်များ၏အသက်ပေတည်း
ကျနော်တို့ PWM controller ကိုနှင့် MPPT controller ကိုများအတွက် 3-တစ်နှစ်အာမခံများအတွက် 1.5-တစ်နှစ်အာမခံပေး။ အဆိုပါအာမခံကာလအတွင်း non-အတုအရည်အသွေးကိုပြဿနာလည်းမရှိစေလျှင်, အခမဲ့အစားထိုးပါလိမ့်မယ်
ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီများ, အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရတို့က 120 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုနှုန်းကို 99% မှာဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုအရန်အရေးကြီးပါသည်, သူတို့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ရဲ့အဘယ်အရာကိုလုပ်သဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်စေ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအီး, ROHS နှင့် IEC မှတ်ပုံတင်ဖြစ်ပြီး, ကိုလည်း 30 ကျော်မူပိုင်ခွင့်ရရှိရန်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller ကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
1.5 ~3နှစ်အခမဲ့အစားထိုး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအားသွင်း controller ကို R ကိုအထူးပြု& : D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်း။
မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ် LDSOLAR နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပစ္စည်းများမြေယာအိပ်မက်စီးရီးနှင့် Sky အိပ်မက်စီးရီးကကိုယ်စားပြုထားတဲ့ PWM နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller စ Tracer အိပ်မက်စီးရီးများနှင့် Tracer အိပ်မက် TU စီးရီးကကိုယ်စားပြုထားတဲ့ MPPT နေရောင်ခြည်နဲ့ controller များပါဝင်သည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး နည်းပညာ နိုင်ငံတကာ အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ ဖောက်သည်စနစ် သရုပ်ပြခြင်း။
ဤဗီဒီယိုတွင်၊ ဘက်ထရီနှင့် ဆိုလာပြားချိတ်ဆက်ရန် ldsolar အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ချိတ်ဆက်နည်းကို သင့်အား ပြသပါမည်။Land Dream Series အားသွင်းကိရိယာသည် 12v၊24 နှင့် 48V စနစ်များအတွက် 10A မှ 60A PWM အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။Land Dream Charge Controller ကို စတင်သတ်မှတ်ရန် ပထမအဆင့် လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည် 12v သို့မဟုတ် 24v ဘက်ထရီနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် ဤဗီဒီယိုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် 12v ဘက်ထရီကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
ldsolar ရဲ့ controller ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို။ဤဗီဒီယိုတွင်၊ ဘက်ထရီနှင့် ဆိုလာပြားချိတ်ဆက်ရန် ldsolar အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ချိတ်ဆက်နည်းကို သင့်အား ပြသပါမည်။ယူနစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားမေးခွန်းများအတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပံ့ပိုးကူညီမှု ပြန်လည်ခေါ်ယူမှုကို ပေးပါ။ဒေါင်းလုပ်ဒေတာရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
ldsolar TD75V Solar Controller အကြောင်း Taobao မှ သုံးစွဲသူများ၏ တုံ့ပြန်ချက် မှတ်ချက်များ
ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်ldsolar TD75V Solar Controller အကြောင်း Amazon မှ မှတ်ချက်များ